China Yakagadziriswa Packaging fekitori nevatengesi | NEMANGWANA
Yedu compostable kurongedza sarudzo dzinosanganisira sarudzo yezvinhu zvekuvaka bhegi rako kunze kweizvozvo ndezvemaindasitiri uye / kana ambient (imba) inogadzikana. Mazhinji edu e5000 akateedzana ezvigadzirwa ari compostable asi zvakare inopa chipingamupinyi chaunoda kuchengetedza chigadzirwa chako uye nekupa shefu kugadzikana. Tine FCN yakatenderwa inogadziriswa yekupakata mhinduro dzinozoisa manyowa pasi pemamiriro ezvinhu, inogadzirwa neyakagadziriswa zviwanikwa. Izvi zvinhu zvechokwadi iro ramangwana rekudzivirira tekinoroji. Isu tinogara tichidyidzana nevagadziri vemafirimu kupa vatengi vedu zvigadzirwa zvitsva muzvipingamupinyi zvinogadzikana, zvakagadzirwa bio-mapurasitiki senge Nzimbe, chibage, uye casava.
Zvakatipoteredza zvine hushamwari uye zvigadzirwa zveGreen
Zvese zvinogadziriswa zvakare uye ambient compostable zvese zviripo.
Enhanced zvipingamupinyi uye akawanda ukobvu sarudzo.
Compostable Packaging Chinyorwa
Kupa vatengi zvipiriso zvemberi muzvinhu zvinogadzirwa isu tinoshanda nevashambadziri vemufirimu / maLaminator nesarudzo yakakura yezvinhu zvinogadzirwa nezvinhu zvinogadziriswa. Svutugadzike yekupakata sarudzo iri kuchinja uye inogara ichichinja, uye isu tinoronga kuwedzera zvimwe zvekushandisa sarudzo mune ramangwana.
BioCareKraft uye BioClear zvinhu zvinogadzirwa zvakaputirwa zvakanaka kune zvakawanda zvakaomeswa uye semi-yakaoma chikafu chikafu. Zvese zvinhu zvinopa chipingaidzo chekudzivirira uye inogona kugadzirwa. Tine mikana yakawanda yeukobvu yekuwedzera kukwezva kunoonekwa uye chipingaidzo.
Anoshamisa maPoint poindi uye odha saizi
Inoenderana neyakawanda homwe yekumisikidza
Compostable Packaging Certification
Kune akawanda mazinga ezvitupa, zvese nemasangano emabhizimusi pamwe nemasangano ehurumende. Kazhinji pane mhando mbiri dzekuputira zvinogadzirwa zvekutanga ndezvekugadzira zvinhu zvinogadzirwa, izvo zvinogona kuiswa kompositi, uye chechipiri ndedzemumba dzinovaka (ambient) dzinogona kugadzira manyowa pasi pemamiriro enzvimbo yekuumba manyowa. Maitiro ekugadzira manyowa anoda kusanganiswa kwetembiricha, hupenyu hwehutachiona, mvura, oxygen, nezvimwe zvinhu.
Akawanda ekunyora schema akagadzirwa kuti aone iyo compostable uye kurasa hunhu hwe compostable yekupakira zvinhu. DIN Certco neVincotte ari iwo maviri masangano mazhinji achimanikidza aya ekunyora mazita.
Compostable Simukai Pouches
Compostable Packaging Firimu
Pashure: simuka homwe / Zip Lock Plastic Bhegi / Simuka Homwe NeZipper
Zvadaro: Chengetera Kudonhedza-Kudzorerwazve Mabhegi